Knowledges Zone: Key Logger ရန်က ကာကွယ်ကြစို့
Gmail အကောင့် အခိုးခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ တော်တော်များများ ကြားသိနေရပါတယ်.. ဒါတွေက တကယ်တမ်း ပြောရရင်တော့ Cybercrime သို့မဟုတ် Computer Crime တွေပါပဲ…
ဖော်ထုတ်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေး ဥပဒေ
အရ အရေးယူတိုင်ကြားလို့ရပါတယ်… လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့
ဒီလိုကျူးလွန်မှုတွေကို အင်တာနက်ဆိုင် တစ်ချို့နဲ့ အသုံးပြုသူ user အချို့က
ကျူးလွန်နေကြပါတယ်… ဘာကြောင့် ကျူးလွန်ကြသလဲဆိုတာကတော့ ကာယကံရှင်တွေ ပေါ်
မူတည်တာပေါ့… ဒါတွေက မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး.. ကမ္ဘာ
အနှံ့အပြားမှာလည်း ဒီကိစ္စတွေ ဖြစ်ပျက်နေပါတယ်..
အဲလို Cybercrime ကို ကျူးလွန်ကြရာမှာ နည်းမျိုးစုံ
အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်.. Virus , Spyware, Malware , Trojan , Key Logger ,
etc… စသည်တို့နဲ့ တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်.. အဲဒါတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဒီနေရာလေးမှာလည်း
အရင်က ဆွေးနွေးထားဖူးပါတယ်.. အထူးသဖြင့်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ
အကောင့်ခိုးခံရမှုတွေက Key Logger တွေကြောင့်လို့ သုံးသပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်..
ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနိုင်သလဲဆိုရင် .. Key Stroke Logging
နည်းပညာဟာ Crimeware တစ်ခု အဖြစ်အသုံးချဖို့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်နေလို့ပါပဲ…
အဲတော့ Key Logger တစ်ခု ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးကြည့်ပါ့မယ်…
Key Logger တစ်ခုဟာ သာမာန်အားဖြင့် .. သင်အသုံးပြုနေတဲ့ Keyboard ကနေ
ရိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့ Key input တွေရဲ့ Value မှန်သမျှကို ကွန်ပြူတာရဲ့
တစ်နေရာမှာ Log file တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်… ဥပမာ သင်က
အင်တာနက်ဆိုင်တစ်ခုသွားရောက်အသုံးပြုတယ်ဆိုပါစို့ သင့်အနေနဲ့ Key Logger
Program ကို install လုပ်ထားတဲ့ စက်မှာ သွားထိုင်မိလိုက်ပြီ.... အဲဒိမှာ
သင်ရိုက်သမျှ Gmail account တွေ Password တွေ .. သင် ဘာတွေ၊ ညာတွေ၊
ပြောခဲ့၊ ကျူခဲ့ တာတွေ၊ Cut/ Copy/ Paste လုပ်ခဲ့တဲ့ စာသားတွေက အစ
အကုန်လုံးကို မှတ်သားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.. အဲ.. သင်က အချိန်စေ့လို့ ပြန်ထ ၊
ငွေရှင်းပြီး ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ
အချက်အလက်တွေဟာ သင်ကိုယ်တိုင်ပဲ ရော့အင့် ဆိုပြီး ခိုးယူသူကို
ခုနောက်ပိုင်း Key Logger Version အသစ်တွေက ပိုတောင် စုံလင်ပါသေးတယ်….
သင်ရဲ့ Mouse လုပ်ရှားမှုတွေကို Record လုပ်နိုင်တဲ့အပြင် Mouse တစ်ချက်
Click လိုက်တိုင်း Screen Capture လုပ်ခြင်းကိုပါ လုပ်နိုင်ပါတယ်..
တစ်ချို့ Key Logger တွေဆိုရင် Screen Capture ကို ပုံအဖြစ်နဲ့တောင်
မဟုတ်ပဲ Video file အဖြစ်နဲ့ပါ ဖမ်းယူနိုင်နေကြပါပြီ… Technology တွေက
မြင့်မားလာတာနဲ့ အမျှ ထွက်လာတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကလည်း Function တွေ
ပိုစုံလင်လာပါတယ်.. key log တွေကို ခိုးယူသူက လာဖွင့်ကြည့်စရာ မလိုပဲ
သူ့ရဲ့ Email ကိုတောင် ပေးပို့နိုင်တဲ့အနေအထားတွေ ရှိနေပါပြီ… အဲတော့ Key
Logger ထည့်သွင်းသွားသူ ဘယ်သူလဲ ၊ ဘယ်ဝါလဲ ဆိုတာကအစ ခြေရာခံလို့
Key Logger တွေကို တီထွင်ဖန်တီးတဲ့လူတွေကတော့ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့
ဖန်တီးကြပေမယ့် အသုံးပြုသူများကတော့ မကောင်းတဲ့ဘက်မှာ အသုံးပြုမှုတွေ
ပိုများလာတာ တွေ့ရပါတယ်… Key Logger တွေမှာ Software အနေနဲ့ သီးသန့်ရှိသလို
Hardware အနေနဲ့ ပါ ဖန်တီးမှုတွေရှိလာ ပါတယ်.. software တွေအနေနဲ့လည်း
Public ကို အလကား ပေးထားတဲ့ keylogger တွေရှိသလို ဈေးနှုန်းနဲ့ တရားဝင် /
မ၀င် ရောင်းချတာတွေလည်းရှိပါတယ်.. Hardware အနေနဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကတော့
ဥပမာအားဖြင့် KeyDemon(KeeLog) က ထုတ်တဲ့ USB hardware keylogger
နှင့် PS/2 keylogger
တို့ ဆိုရင် အသုံးပြုတဲ့စက်က USB keyboard ဖြစ်ဖြစ် PS2 keyboard ဖြစ်ဖြစ်
အသုံးပြုလို့ရအောင် ဖန်တီးထားပြီး တရားဝင်ကို ရောင်းချထားကြပါတယ်…အခြားသော
Hardware KeyLogger တွေလည်း အများကြီး ပေါ်ထွက်နေပါပြီ... ကဲ အဲဒိတော့
ကျနော်တို့ တွေ အဲဒိရန်တွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ ???? ဒါဟာ
စဉ်းစားစရာပါပဲ.... ကျနော်တို့မြန်မာများ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်
မစဉ်းစားပဲနေလို့ကတော့ ရှိသမျှ ပြောင်ဖို့ ၊ လှူတယ်လို့သဘောထားပြီး
နည်းလမ်းတွေတော့ ရှိပါတယ်.. မတွေးမိကြရင်တော့လည်း မသိနိုင်ဘူးပေါ့..
သာမန် Key Logger တစ်ခုကို အရူးလုပ်လို့ရပါတယ်… Screen Capture
မလုပ်နိုင်တဲ့ ဟာမျိုးဆိုရင်ပေါ့ .. Manual ကာကွယ်နည်းပါပဲ.. သိသွားရင်
ထတောင် အော်ရယ်မိဦးမယ်.. ဥပမာအားဖြင့် သင့် အကောင့်ရဲ့ Password က
kokowhoami7 ပဲထားပါတော့ဗျာ… အဲဒိအခါကျ Gtalk ကို ဖွင့်လိုက်မယ်
barnyarami7 တစ်ခါရိုက်မယ် (arrow key မသုံးရ) Mouse cursor ကို ရှေ့ ၄
လုံးကျော်ကို ပို့ပြီး who ဆိုပြီးရိုက်မယ်.. ပြီးရင် Firefox ဖွင့်ပြီး..
Google search မှာ ရိုက်ချင်တာလျှောက်ရှိုက်ပေါ့ ပြီးရင် Mouse
ကိုသုံးပြီး ပဲ Gtalk ရဲ့ Password textBox မှာ barnyar ဆိုတာကို select
လုပ်ပြီး koko ကို ထပ်ရိုက်ပေါ့.. အဲလိုမျိုး အနေအထားမှာ
လုံခြုံမှုရှိဖို့လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Gtalk လေး Login လုပ်ဖို့တော့
အချိန်လေးနဲနဲကြာတာ ကို စိတ်ရှုပ်တယ်လို့ သဘောမထားကြစေချင်ပါဘူး.. ခုလို
လှည့်စားလိုက်ခြင်း အားဖြင့် Key Logger ရဲ့ Log file မှာ
ဘယ်လိုမှတ်သွားမလဲ ဆိုတော့ barnyarami7who<သင်လျှောက်ရိုက်တဲ့
ဘာညာကွိကွများ abcdef@#$%&>koko .... အဲလို ဖြစ်သွားမယ်.. အဲတော့
သင့်ရဲ့ Password ကို ခိုးယူမယ့်လူက ခန့်မှန်းလို့မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့..
တခြား သင်စကားပြောတာတွေကိုလည်း အဲလို လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဆီက
ခိုးယူချင်တဲ့လူအနေနဲ့ တစ်ချို့တစ်ဝက်ကို ခိုးယူလို့ ရတယ်ဆိုရင်တောင်မှ
> All Programs > Accessories > Accessibility > On-Screen
Keyboard ဆိုတာကို အသုံးပြုခြင်းပါပဲ.. အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့
လုံခြုံပေမယ့် .. Screen Capturing ကိုတော့ အောင်မြင်စွာ တွန်းလှန်နိုင်မယ်
မထင်ပါဘူး.. (ကျနော့်အယူအဆပါ )
နောက်တစ်နည်းကတော့ Aplin Software က အလကား ထုတ်တဲ့ Neo’s safekeys
ဆိုတာလေးပါပဲ… တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်.. နောက်ပိုင်း Key Logger တွေက သင်
Copy တဲ့ စာသားမှန်သမျှကို Windows ရဲ့ Clipboard က တဆင့်
မှတ်သားနိုင်ပါတယ်.. ဒီနေရာမှာ Key Logger တွေအနေနဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုက
Drag and Drop လုပ်ခြင်းတွေ ကို မမှတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာပါပဲ..
ကျနော့်အတွေ့အကြုံလေး အရ မတွေ့ဖူးသေးပါဘူး.. ဒီအားနည်းချက်ကိုနင်းပြီး
Neo’s safekeys က ဖန်တီးထားတာပါ.. Drag and Drop လုပ်တာကိုလည်း အလွယ်တကူ
လုပ်လို့မရရင် Injection mode နဲ့ ပြုလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်.. ဥမမာအားဖြင့်
Gtalk က ပက်စ၀က်ရိုက်တဲ့ Textbox ကို ရိုးရိုး Drag and Drop လုပ်ရင်
မရပါဘူး.. Neo’s safekeys ကနေ Injection mode နဲ့ Drag and Drop လုပ်မှ
ရပါတယ်… အောက်ကပုံလေးမှာ ကြည့်ကြည့်ပါ..
အသေးစိတ်ကိုတော့ သူရဲ့ Official site မှာလေ့လာပါ… Portable ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖြစ်နိုင်ရင် Download လုပ်ပြီး USB drive ထဲထည့်ပြီး သွားလေရာ ယူသာသွားပါ.. သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေ အတွက် လုံခြုံပါလိမ့်မယ်..
အဲဒိတော့ သင်တို့အနေနဲ့ ရှောင်ကျဉ်ရမှာတွေက ..
အင်တာနက်ဆိုင် ကိုသွားတာနဲ့ Keyboard တပ်ထားတဲ့ ခေါင်းကို စစ်ပါ..
Keyboard က ကွန်ပြူတာနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်မနေပဲ အပေါ်ကပုံထဲကလိုမျိုး KeyDemon
hardware keylogger ကိုခံပြီး ဆက်ထားတယ်ဆိုရင် အဲဒိစက်ကို မသုံးပါနဲ့…
ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒိဆိုင်ကနေ လှည့်ပြန်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ..
Task Manager (Ctrl + Alt + Del) ကိုခေါ်ပြီး Key Logger
နဲ့ပတ်သက်တာကိုတွေ့ရင် End Task လုပ်ပါလို့ ကျနော် ဒီနေရာမှာ
မပြောချင်ပါဘူး.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Key Logger
(Adramax , CyberGate, Ecodsoft,
Family, MAC Perfect, KGB, All In One, Autokeys, Award, KeyProwler,
Sanmaxi, Remote Logger, Firefox keylog add-on, etc… etc… ) စသဖြင့်
စသဖြင့် ရှိကြတဲ့အတွက် (၀ါသနာပါရင် Google ကို အလကားမထားပါနဲ့ ရှာခိုင်းပါ)
… Task Manager ခေါ်ပြီး ရှင်းဖို့ဆိုတာ အမျိုးအစားမသိတဲ့အတွက်
မလွယ်ကူလှပါဘူး.. အဲဒိအပြင်.. အချို့သော Key Logger များဟာ Task Manager မှာ မပေါ်အောင် ဖျောက်ထားနိုင်ကြပါတယ်… အဲလိုအနေအထားမျိုးမှာဆိုရင်တော့ Security Task ManagerOfficial Site) ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်… (
နောက်တစ်ခုက Gmail Password Recovery ဆိုတဲ့ Software ကိုလည်း
မမေ့သင့်ပါဘူး… ဒီ Software က Gmail or Gtalk တစ်ခုခုကနေ Log in
၀င်ခဲ့တာတွေကို HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Google\_Google Talk\_Accounts
ဆိုတဲ့ နေရာကနေ တဆင့် Password ကို ရယူနိုင်ခြင်းပါပဲ.. အဲဒါကို Manual
ကိုယ်တိုင် Registry ထဲဝင်ပြီး သွားဖျက်လို့ ရသလို Registry
ကိုဝင်ခွင့်မပေးတဲ့ ဆိုင်တွေက ကွန်ပြူတာတွေအတွက်ကိုတော့ ဒီနေရာမှာဆွေးနွေးထားဖူးတဲ့
Application လေးက သင့်ကို အကူအညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်… နောက်ပြီး အမြဲတမ်း
သတိထားရမှာက ဘယ်တော့မှ Remember Password ကို အမှန်ခြစ်မလုပ်မိဖို့နဲ့ ..
Sign Out လုပ်ပြီးတိုင်း ကျန်နေတတ်တဲ့ Account
name နဲ့ Password တွေကို ပြန်ဖျက်ပေးခဲ့ဖို့ပါပဲ... နောက်ပြီး Firefox
မှာဆိုရင်လည်း Tools > Clear Recent History ကို ပြန်လုပ်ခဲ့ဖို့
၊Tools> Options.. > Privacy Tab > မှာ Clear history when
Firefox closes ကို အမှန်ခြစ်ထားဖို့နဲ့ Security Tab က Remember passwords
for sites ဆိုတာကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ထားဖို့... မမေ့ပါနဲ့..
နောက်တစ်ခုကတော့ ဟိုပိတ်ဒီပိတ်လုပ်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ သင်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံမှုအတွက် အဆင်ပြေစွာအသုံပြုနိုင်ဖို့ Reg Hack(Dr.Ox), Registry Tweak or, အခြားအခြားသော Registry Tweaker တွေ ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်..
သတိပေးချင်တာကတော့ သင်တို့အနေနဲ့ Gmail ကို ၀င်ဖို့အတွက် Link ကို
တစ်ခြားတစ်ယောက်ယောက်က ပေးလာတယ်ဆိုရင် အောက်ကလိုမျိုး ပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ပဲ
တစ်ခြား Domain တစ်ခုခုနဲ့ ... ဥပမာ http://www.ggoogle.com/mail/index.php ... ဆိုပြီး Fake address နဲ့ ပုံမှားရိုက်ပြီး Password ကိုရယူတာမျိုးတွေ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို လည်း သတိပြုကြစေချင်ပါတယ်...
ဒါကတော့ Programmer တစ်ချို့က မသိနားမလည်သေးတဲ့ လူတွေကို နားလှည့်ပါးရိုက် လုပ်တဲ့နည်းတွေပါ..